5-ta ugu Sareysa ee Loo Adeegsaday Dharka Iibka ah ee Papua New Guinea
Iibiyaha Dharka ee UGU SAREEYA ee Shiinaha
Alaabtayadu waxay isticmaaleen dhar/kabo la isticmaalay/bacaha la isticmaalay
Dumarka la isticmaalo
Dharka dumarka ee la isticmaalo
Haweenka Sare ee la Isticmaalay
Shaadhka dumarka ee la isticmaalay
Dharka xariirta ah ee la isticmaalay
Surwaalka Haweenka La Isticmaalay
Surwaalka Fashion ee la isticmaalay
Ladies Jeans Surwaal la isticmaalay
Dumar la Isticmaalay Jumpsuit
Ladies Mini Surwaal Adeegsaday
Ladies Capri Surwaalka la isticmaalay
Dharka xariirta ee dumarka la isticmaalay
Ladies Jean Pants oo la isticmaalay
Lugaha la isticmaalay
Surwaalka Abtiyaal la isticmaalay
Guud ahaan Haweenka Demin ee la isticmaalay
Dharka la isticmaalay
Labiska suufka ah ee la isticmaalay
Dharka suufka ah ee la isticmaalay
Shaadhka Xafiiska ee la isticmaalay
Dharka ragga ee la isticmaalo
Surwaalada Ragga ee la isticmaalo
Surwaalka suufka ah ee Ragga
Ragga La Isticmaalay Capri Surwaalka
Surwaalka Kulaylaha ee Ragga Isticmaala
Surwaal Dheer Oo La Isticmaalay Dadka Waaweyn
Surwaal Gaaban oo Xamuul ah oo la Isticmaalay
Calaamadaha loo isticmaalo
Bacaha la isticmaalo
Alaabta la isticmaalo
Calool isku dhafan
Hissen Global Client
Qiimo u goynta
Posted on Waxaa laga yaabaa 24, 2022 Waxaa laga yaabaa 24, 2022 by Fei (aasaasaha)
2 Lacagta ECO ee dharka
3 Zagumi-Jumlad Iibiyeyaasha Dharka laga isticmaalo ee Papua New Guinea
4 EXTRATEX BULGARIA LTD.
5 GEBETEX Tri Normandie
6 Alaab-qeybiyeyaasha Dharka La Isticmaalo ee Jumlada ee Papua New Guinea Gabagabada
Dhaqaalaha caalamiga ah ee maanta, waxa aad uga muhimsan sidii hore in la helo la isku halayn karo oo la awoodi karo alaab-qeybiyeyaasha dharka gacanta labaad ganacsigaaga. Haddii aad Papua New Guinea ka raadinayso alaab-qeybiyaha dharka la isticmaalo, waxaad timid meeshii saxda ahayd. Maqaalkan, waxaan ku wadaagi doonaa shanta doorasho ee ugu sareysa alaab-qeybiyeyaasha dharka la isticmaalo ee jumlada ah ee Papua New Guinea. Waxaan rajeyneynaa in macluumaadkani uu kaa caawin doono inaad hesho alaab-qeybiye ku habboon baahiyahaaga ganacsi. Waad ku mahadsan tahay akhrinta!
Iibiyaha dharka ee la isticmaalay, dharka labaad jumlo iibiye; soo saaraha
★ Alaabooyinka Muhiimka ah
kabaha la isticmaalay, dharka la isticmaalay, bacaha la isticmaalay
Hissen waxa uu ahaa hogaamiye ku takhasusay warshadaha dharka gacanta labaad ilaa 2012, isaga oo bixiya dhar la isticmaalay, bacaha gacan labaadka ah, iyo kabo la isticmaalo in ka badan 60 wadan, oo ay ku jiraan Aasiya, Bariga Dhexe, iyo Afrika.
Shirkaddu waxay leedahay hab-socodka xakamaynta tayada adag iyadoo samaynaysa 5 jeer oo kormeer ah dhammaan kala-soocidda iyo tallaabada wax-soo-saarka. Sababtoo ah ururinta aadka u weyn ee Hissen ee nidaamka dharka la isticmaalay, waxay ku siin karaan in ka badan 120 xulasho oo aad ka dooran karto.
Natiijo ahaan, waxaad si qurux badan ugu kalsoonaan kartaa inaad la sameyso ganacsi jumlad ah oo dharka la isticmaalay. Hissen waxay noqon doontaa doorasho xigmad leh sida alaab-qeybiye la isticmaalay.
Lacagta ECO ee dharka
Bacaha dharka ee la isticmaalay, kabo iyo qalab kale.
Soo gudbi Sawirka ...
ECO CASH FOR CLOTHES waa dhoofiye ganacsi jumlad ah oo dharka la isticmaalay oo la aasaasay 2010, xarunteeduna tahay Harlow, Boqortooyada Ingiriiska, waxayna siisaa dharka la isticmaalay inta badan suuqa Yurub iyo adduunka intiisa kale. Waxay dammaanad qaadaysaa shahaado tayo leh waxayna abuurtaa sumcad heer sare ah oo suuqa ah.
Shaqaalahoodu waxay si hufan uga soo ururiyaan dharka la isticmaalay meelo kala duwan oo wax lagu ururiyo. Kala soocida, darajooyinka, iyo xirxiran ee baallooyinka ka dib, waxaa loo qaybiyay macaamiishooda adduunka oo dhan.
Haddii aad leedahay wax shuruudo ah oo ku saabsan dharka la isticmaalay, xor ayaad u tahay inaad la xidhiidho ECO CASH FOR THERES wixii faahfaahin dheeraad ah.
Zagumi-Jumlad Iibiyeyaasha Dharka laga isticmaalo ee Papua New Guinea
✎ Nooca shirkadda
✎ Alaabooyinka Muhiimka ah
kabo la isticmaalay, dhar la isticmaalay, bacaha gacan labaad, maryo
Shirkadda Zagumi waxay isu taagtay mid ka mid ah meheradaha ugu sumcadda badan suuqa dharka gacanta labaad.
Khibraddooda baaxadda leh ee warshadaha iyo dadaalkooda xirfadeed, waxay ku guuleysteen inay boos muhiim ah ka helaan goobtan sababtoo ah ma aha oo kaliya faa'iido leh laakiin sidoo kale waxaa sabab u ah waqtiga lagu bixiyo horumarinta hawlgallo hufan. Shirkaddu waxay inta badan diiradda saartaa soo saarista dharka tayada leh ee la isticmaalay. Si loo hubiyo ku qanacsanaanta macaamiisha adduunka oo dhan iyadoo la siinayo adeegyo lagu qanco.
Dharka Zagumi ee la isticmaalo ayaa ah kuwa tayadoodu aad u sarreyso oo qiimahoodu aad u sarreeyo. Dharkooda la isticmaalay ayaa caan ka ah macaamiisha adduunka oo dhan sababtoo ah tayada iyo qiimaha ay leeyihiin. Zagumi waa il la isku halayn karo oo laga helo dharka la isticmaalay ee shakhsiyaadka iyo ganacsiyada labadaba.
EXTRATEX BULGARIA LTD.
dhoofiye, Jumladleyda dharka ee dukaamada
✔Alaabooyinka Muhiimka ah
Dhar la isticmaalay, kabo la isticmaalay, bacaha la isticmaalay
EXTRATEX BULGARIA LTD waxay ku takhasustay ganacsiga jumlada dharka la isticmaalay, oo ku yaal Varna, Bulgaria. Waxay ku jireen warshadaha dharka ee gacan labaadka ah muddo 10 sano ah waxayna dhiseen aasaas aad u wanaagsan adduunka oo dhan suuqa dharka gacan labaadka ah.
Shirkadu waxay bixin kartaa noocyo kala duwan oo dhar gacan labaad ah, oo ay ku jiraan dharka iyo kabaha la isticmaalo ee ragga iyo dumarka. Alaabooyinkooda ayaa ah kuwo aad u wanaagsan, kuwaas oo ka yimaada dad deeqsi ah oo gacan ka geysta ganacsigooda iyaga oo siiya dhar la isticmaalay.
Intaa waxaa dheer, dharka ay shirkaddu isticmaasho ayaa ah mid si fiican loo soo buuxiyay ka hor inta aan loo dhoofin wadamada kale si loo hubiyo in aysan waxyeelo soo gaarin inta lagu jiro gaadiidka. Natiijo ahaan, EXTRATEX BULGARIA LTD waa mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha dharka la isticmaalo ee ugu kalsoonida badan adduunka.
Waxyaabaha Muhiimka ah
Gebetex Tri Normandie waa dhoofiye bixisa dharka la isticmaalay ee jumlada. Shirkaddu waxay ku jirtay warshadaha dharka gacanta labaad muddo 10 sano ah, waxayna heshay sumcad barwaaqo ah gudaha.
Gebetex waxay leedahay warshad weyn oo kala soocista oo ku taal Vernon, waxayna soo saari kartaa in ka badan 300 oo tan oo dhar la isticmaalay bishii. Waxay hayaan tiro aad u badan oo ah dharka la isticmaalay ee ragga iyo dumarka.
Qiimaha hooseeya ee ay bixiso Gebetex Tri Normandie waxaa sabab u ah la'aanta kharashaadka dheeraadka ah marka loo eego asxaabta kale. Waxay u ogolaataa inay ku tartamaan suuqa iyagoo wali siinaya dhar la isticmaalay oo tayo sare leh macaamiishooda jumlada ah.
Guji si aad u soo dirto weydiinta
Alaab-qeybiyeyaasha Dharka La Isticmaalo ee Jumlada ee Papua New Guinea Gabagabada
Haddii aad raadinayso mid la isku halayn karo alaab-qeybiye la isticmaalay oo jumlo ah gudaha Papua New Guinea, waxaan kugula talineynaa inaad la xiriirto ganacsiyada ku taxan maqaalkan. Dhammaan alaab-qeybiyeyaashan waa la baaray waxayna buuxiyeen tayada sare iyo heerarka adeegga macaamiisha. Waxaan rajeyneynaa in macluumaadkani uu yahay mid waxtar leh waxaanan kuu rajeyneynaa nasiib wacan inaad hesho alaab-qeybiye ku habboon baahiyahaaga.
guji si aad wax badan u ogaato
Dhaqaalaha adduunka maanta, aad ayuu uga muhimsan yahay sidii hore[...]
5-ta ugu Sarreysa ee ugu caansan Dharka Labaad ee Masar
Iibiyeyaasha dharka labiska ah ayaa caan ka helay Masar iyadoo in ka badan [...]
5-ta ugu Sarreysa ee ugu Caansan Dharka Labaad ee Qubrus
Magacyo dhowr ah ayaa soo muuqda marka ay [...]
5-ta ugu Sarreysa ee ugu Caansan Dharka Labaad ee Baxrayn
Bahrain waa waddan yar oo ku yaal [...]
5-ta ugu Sareysa ee Dharka Iibka ah ee la isticmaalo gudaha Nauru
Maanta, waxaan ka wada hadli doonaa 5-ta ugu sarreeya ee jumlada la isticmaalo [...]
5-ta Warshadood ee Dharka La Isticmaalo ee Jumlada ugu Sarreyso ee Israa'iil
Marka ay timaado helitaanka jumlada dharka la isticmaalay, Israel[...]
5-ta ugu Sareysa ee Kabaha La Isticmaalo Jumlada ee Cambodia
Raadinta alaab-qeybiye jumlo ah dharka la isticmaalay gudaha[...]
5-ta Warshadood ee ugu Sarreysa ee La Isticmaalo Jumlada Dharka ee Shanghai
Raadinta warshad dharka la isticmaalo oo sumcad leh[...]
5-ta Warshadood ee ugu Sarreysa ee La Isticmaalo Jumlada Dharka ee Singapore
Marka loo eego tirakoobkii ugu dambeeyay, 2020-meeyadii, Singapore waxa ay soo dejisay [...]
5-ta Sare ee Isku-dhafka Rags Jumlo ee Lietuva
Lietuva, waxaa jira jumlo-iibayaal badan oo isku dhafan oo [...]
5-ta Sare ee Isku-dhafka Rags Jumlo ee Belarus
Jumleyaal badan oo calal ah oo isku dhafan oo ku yaal Belarus, laakiin maaha dhammaan [...]
5-ta Sare ee Isku-dhafka Rags Jumlo ee Shiinaha
Marooyin isku dhafan ayaa ah badeecad kulul suuqa jumlada. Haddii aad [...]
Entry waxa loo posted in Industry News iyo tagged hissen, 5-ta ugu Sareysa ee Loo Adeegsaday Dharka Iibka ah ee Papua New Guinea.
10 sano oo waayo-aragnimo ah oo ku saabsan warshadaha dharka ee la isticmaalay. Wuxuu qoray in ka badan 100 maqaallo cilmi baaris ah oo ku saabsan warshadaha dharka.
26 fikradaha ah5-ta ugu Sareysa ee Loo Adeegsaday Dharka Iibka ah ee Papua New Guinea"
si joogto ah wuxuu leeyahay,
Caadi ahaan ma akhriyi maqaal ku saabsan bⅼоgs, si kastaba ha ahaatee waxaan rabaa inaan sheego
in qoraalkan aad ii cadaadiyay inaan isku dayo oo sameeyo!
Dhadhanka qoraalkaaga ayaa iga yaabiyay. Mahadsanid,
post aad u fiican.
May 25, 2022 at 6: am 37
Fei (aasaasaha) wuxuu leeyahay,
June 8, 2022 at 2: am 10
waa 888 wuxuu leeyahay,
Runtii waxaad ka dhigaysaa mid aad ugu fudud soo jeedintaada laakiin waxaan u arkaa arrintan inay runtii tahay wax taas
Waxaan u maleynayaa inaanan waligey fahmi doonin. Waxay u muuqataa mid aad u adag oo aad u ballaadhan
aniga. Waxaan sugayaa qoraalkaaga soo socda, waxaan isku dayi doonaa inaan gacanta ku dhigo
May 27, 2022 at 11: am 08
Ae888 wuxuu leeyahay,
Qayb cajiib ah! Waxaan tan hadda u gudbiyay saaxiibkii oo wax yar qabanayay
cilmi baadhis ku saabsan arrintan. Oo runtii wuxuu ii soo iibiyay qadada sababtoo ah xaqiiqda aan isaga u helay…
lol. Marka bal aan dib u dhaho this. Waad ku mahadsan tahay cuntada !!
Laakiin haa, mahadsanid waqti ku qaadashada inaad ka hadasho tan
arrintu halkan mareegahaaga.
May 27, 2022 at 1: 01 pm
June 8, 2022 at 2: am 11
Boggan wuxuu ahaa… sidee u dhahdaa? Khuseeya !!
Ugu dambayntii waxaan helay wax i caawiyay. Mahad badan!
May 27, 2022 at 6: 55 pm
Habka aad u sharaxday dhammaan waxa ku jira cutubkan waa mid aad u faraxsan,
qof walba si fudud ayuu u fahmi karaa, aad baad u mahadsantahay.
May 29, 2022 at 10: 17 pm
ae888 aad ký wuxuu leeyahay,
Xaqiiqdii waad ku arki laheyd xirfadahaaga maqaalka aad qoreyso.
Waaxdu waxay rajaynaysaa qoraayaal aad u qiiro badan sida adiga oo kale
kama cabsanayaan inay sheegaan sida ay u aaminsan yihiin. Mar walba raac
May 29, 2022 at 11: 58 pm
Mareegtan runtii waxay haysaa dhammaan macluumaadka aan rabay ee ku saabsan mawduucan mana garanayn cid aan waydiiyo.
May 30, 2022 at 12: am 46
fariin ii soo dir
June 8, 2022 at 2: am 12
Tani waa markii ugu horeysay ee aan booqasho degdeg ah ku yimaado halkan, runtiina waan ahay
ku faraxsanahay in aan dhammaan ku akhriyo hal meel.
May 30, 2022 at 3: 36 pm
Si degdeg ah mareegtan waxay caan ku noqon doontaa dhammaan blogging iyo
booqdayaasha dhismaha goobta, sababtoo ah waxa ku jira farxad
May 30, 2022 at 7: 25 pm
Wow, qaab dhismeedka weblog yaabka leh! Intee in le'eg ayaad weligaa blog-garaynaysay?
waxaad fududaynaysaa in aad blog ka eegto. Muuqaalka guud ee mareegahaagu waa mid aad u fiican, si caqli badan
sida waxyaabaha ku jira!
May 30, 2022 at 10: 59 pm
Habkaagu waa mid gaar ah marka loo eego dadka kale ee aan wax ka akhriyey.
Waad ku mahadsan tahay dhajinta markaad fursad u heshay, Qiyaas waxaan kaliya buug u qori doonaa calaamadee blogkan.
May 31, 2022 at 10: am 52
Kuwani dhab ahaantii waa fikrado cajiib ah oo ku saabsan qorista blogga.
Waxaad halkan ku taabatay waxyaabo degdeg ah. Si kastaba ha ahaatee sii wad qorista.
May 31, 2022 at 9: 37 pm
Way fiicantahay! Qaar ka mid ah dhibco aad u ansax ah! Waan ku mahadsan yahay inaad qorto maqaalkan iyo sidoo kale inta kale
website-ka ayaa sidoo kale aad u fiican.
June 1, 2022 at 12: 44 pm
https://khophimhay.us/ wuxuu leeyahay,
Waaah! Runtii aad ayaan ugu riyaaqayaa shaxanka / dulucda degelkan.
Waa wax fudud, haddana waxtar leh. Marar badan aad bay u adag tahay in la helo “dheelitirka qumman” ee u dhexeeya adeegsiga iyo muuqaalka.
Waa inaan idhaahdaa shaqo aad u wanaagsan ayaad tan ku qabatay.
Intaa waxaa dheer, blogku si degdeg ah ayuu iigu rarnaa
Chrome ku jira. Blog heer sare ah!
June 1, 2022 at 1: 07 pm
Salaan, post nadiif ah. Waxaa jira arrin ay la socoto mareegahaaga shabakadda
sahamiye, ma tijaabin lahaa tan? IE weli waa hogaamiyaha suuqa iyo wanaagsan
qayb ka mid ah dadka kale ayaa ka tagi doona qoraalkaaga weyn sababtoo ah
June 2, 2022 at 12: am 45
tusaale ahaan wuxuu leeyahay,
Post aad u fiican. Kaliya waan ku turunturooday adiga
weblog oo waxaan rabay in aan sheego in aan aad ugu riyaaqay in aan ku dhex wareego qoraaladaada blogka.
Si kastaba ha noqotee, waxaan ku biiri doonaa quudintaada iyo aniga
horre aad mar kale u qori mar dhow!
June 2, 2022 at 6: am 02
qaybi wuxuu leeyahay,
Aad ayaan ula dhacay awoodahaaga qoraal
si nadiif ah sida qaabka blog yoᥙr. Tani ma maaddo lacag ah
arrin mise adiga ayaa is-bedeshay? Si kastaba ha ahaatee si fiican u soco
Qoraal ahaan, waa wax aan caadi ahayn in la eego blog wanaagsan oo kan oo kale ah
June 2, 2022 at 8: am 55
dhiig wuxuu leeyahay,
Qoraal qurux badan. Kaliya waan ku turunturooday weblogkaaga
oo aan jeclaystay inaan sheego inaan runtii jeclaaday daalacashada qoraalladaada weblog.
Calaa kulli xaal waan iska diiwaan gelin doonaa rss feed kaaga waana ku rajeynayaa
mar kale mar dhow qor!
June 5, 2022 at 8: am 18
khophimhay.us wuxuu leeyahay,
Markii aan tan akhriyay waxaan u maleeyay inay aad ii iftiiminayso.
Waan ku qanacsanahay inaad waqti iyo dadaal ku bixisay isku duba ridka maqaalkan.
Waxaan mar kale isku arkay nafteyda inaan waqti badan ku bixinayo labadaba
akhriska iyo faallaynta. Laakiin haddaba maxaa jira, weli waxay ahayd mid qiimo leh!
June 5, 2022 at 1: 34 pm
Claribel wuxuu leeyahay,
Aniga iyo xaaskayga ayaa halkan ku turunturooday bogg shabakadeed oo kala duwan waxaanan ku fikirnay inaan hubiyo
waxyaabaha baxay. Waan ka helay waxa aan arko markaa hada waan ku raacayaa adiga.
Fadlan fiiri bogga internetka mar labaad.
June 6, 2022 at 12: am 13
Laawi wuxuu leeyahay,
Taasi waa talo wanaagsan oo gaar ah si aad ugu cusub blogosphere.
A waa inuu aqriyaa boostada!
June 6, 2022 at 10: am 17
Aad bay u fududdahay in la ogaado arrin kasta oo ku jirta shabakadda marka la barbardhigo
buugaagta wax lagu barto, sida aan ka helay baradhan mareegahaan.
June 6, 2022 at 1: 12 pm
underplay wuxuu leeyahay,
Waad ku mahadsan tahay ⲣosting-kaaga yaabka leh! Runtii aad ayaan ugu riyaaqay akhrintiisa, waxaad noqon doontaa qoraa weyn.
Waxaan had iyo jeer calaamadayn doonaa balooggaaga waxaana laga yaabaa inaan dib u soo celiyo mar dhow. Waxaan rabaa inaan ku dhiirigeliyo inaad si dhab ah u sii waddo
qoraal wanaagsan, habeen wanaagsan!
June 7, 2022 at 12: am 23
: [emailka waa la ilaaliyay]
Dharka xagaaga ee la isticmaalo Dharka Jiilaalka ee la isticmaalo Kabaha La Isticmaalay Bacaha la isticmaalo
Dhoofinta Dharka iyo Kabaha ee Hissen Global
Copyright © 2022 HISSENGLOBAL.COM Bayaanka Shirkadda Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah Shuruudaha adeegga Adeegga dhoofinta